दश मिनेटको रानी खर्कको यात्रा गर्दा – Khabar Silo
नाम सुनेको, जाने मन पनि भएको तर जाने साईत नजुरको रानी खर्कमा यस पाली असार चार गते आउजाउ र दृश्य अबलोकन गरेर २८ मिनेटका लागि जाने साईत जुर्‍यो। कुरा रानी सैनामा नाम्खा गाउँ पालिकाका तीन वटा गाउँबासीले पर्यटकन प्रर्बद्धन गर्न धार्मिक प्रर्बचन रानी खर्कमा आयोजना गरिएको थियो। प्रवचनका मुख्य गुरु हुनुहुन्थ्यो याल्बाङ गुम्बा लामा पेमा रिक्साल।
सात दिनसम्म उहाँले सुन्दर हिमाली उपत्यकाको रुप धारण गरेको रानी खर्कमा प्रबचन दिएर समापनको पछिल्लो दिन गुरुलाई नाम्खा कै चाला गाउँको पुजामा हेलिकोप्टरमा जानु पर्ने र रानी खर्कमा हेलिकोप्टर जादै छ भन्‍ने कुरा बिहान मात्र थाहा पाए । यो कुरा मलाई नाम्खा गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख अस्विनी कुमार देबकोटाले जानकारी दिनु भएको थियो। पछि जान पनि पाइने भयो।
हेलिकोप्टर उडान भरे पछि नौ मिनेटमा रानी खर्कमा अबतरण गरेको थियो । हल्का बादल पनि लागेको कारण सिमकोटबाट रानी खर्कको हेलिकोप्टर यात्रा गर्दा अग्ला हिमालका बीचमा साना ठूला हिमताल, नदी, हिउँ जमेर सेताम्मे हिमालका बिच लामा र फराकिला हिमाली पाटनको दृश्यावलोकन गर्दै हेलिकोप्टर रानी खर्कमा अबतरण गर्दा गुरु पेमा रिक्साल चाला जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। यस बिचमा गुरुको दर्शन पनि गर्न पाइयो। गुरुसंग बीस सेकेन्ड साक्षत्कार, प्रणाम र भलाकुसारी पछि अबतरणको एक मिनेटमा उहाँ चालातर्फ हेलिकोप्टरमा उड्नु भयो।
प्रशस्त पर्यटकीय सम्भाबना बोकेको भएर पनि प्रचार प्रसारको अभाबले ओझेलमा परेको रानी खर्क तीन जिल्लाको मिलन बिन्दुका रुपमा रहेको छ । करिब चार हजार मिटर उचाईमा रहेको हिमाली उपत्यकाको स्वरुप पाएको रानी खर्क पुग्दा अर्कै किसिमको अनुभूति हुन्छ।
बाजुरा, हुम्ला र बझाङ जिल्लाको सिमाना पर्ने रानी खर्क धेरै कुराबाट मनोरञ्‍जन लिन सकिने स्थानका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। प्रकृतिले दिएका उपहार पनि मान्नै पर्छ । न कसैले संरक्षण गरेरका चिज हुन ति न त उत्पादन नै। जो छन् सब आफै प्रकृतिका बरदान हुन।
वर्षमा छ महिना मात्र मानिसहरुको केही रुपमा आवत जावत हुने रानी खर्क अहिले बिशेष गरेर खर्ककै रुपमा रहदै आएको छ। त्यहाँका मनोरम दृश्यहरु हेर्दा पर्यटकहरुका लागि धेरै रमणीय र अनुपम दृश्यहरु ऋबलोकन गर्न सकिने स्थिति छ।
के के छन् रानी खर्कमा ?
पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि पहिचान हुन नसकेको रानी खर्कमा पहिलो कुरा हुम्ला पट्टीको सैपाल हिमाल, हिमालको एकातिर तीन सय बर्ष पुरानो गुम्बा, खर्क, झरना, हिमनदी, हिम ताल, पाटन, जंगली जनावर नाउर, कस्तुरी, मृग, डाँफे, च्याखुरा लगाएतका पंछीहरु पनि छन्।
सयौको संख्यामा रहेका खर्क, त्यहाँ भेडा, बाख्रा, याक, चौरी, जुमा, झोपा, घोडाको बथान पनि बाक्लै देखिने गरेको छ । त्यो संगै सयौ किसिमका जडिबुटीको बास्नाले पनि त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई मोहित नपार्ने त कुरै भएन।उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाईने बिभिन्न प्रजातिका फुलहरु फुलेर पनि रंगि बिरंगी देखिने पाटनको मनोरम दृश्य पनि कम्ती लोभ लाग्दो छैन । यतै बसौ बसौ जस्तो लाग्ने । छ महिना भने हिउँसंगै सुत्ने रानी खर्कमा त्यो समयमा कसैको पनि आवत जावत हुदैन।
कसरी जाने खानी खर्क ?
छ महिना मानसरोवर कैलाशको धार्मिक यात्रा गर्ने सिजन भएको कारण हेलिकोप्टरबाट पनि यात्रा गर्न सकिने अबस्था छ। तर, पैदलै जान पनि खासै कठिन भने छैन। नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर तीनको खगालगाउँबाट बिस्तारै गए तीन दिन र अलि छिटै हिडे दुई दिनमा रानी खर्क पुग्न सकिने अवस्था छ।
बाटोमा पनि अनेक रमणीय दृश्यकहरु अवलोकन गर्दै दुई वटा पहाडहरु काट्नु पर्छ। रानी खर्कमा अन्य केही पनि व्‍यवस्था नभएको हुँदा सबै चिब बोक्नु पर्ने हुन्छ। या त खर्कालुहरुसंग बास बस्नु पर्ने अवस्था छ। यो कुरा भने यात्रा गर्नेले पहिले नै निधो गर्नु आवश्यक छ।
काठमाडौं । नेपाली गायक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको १८ औं सिजनमा शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् । आइतबार अमेरिकी च्यानल एबिसीबाट प्रशारण भएको पहिलो शृङ्खलाबाट उनी छानिएका हुन् । उनी शीर्ष २० भित्र परेका छन् । २० वर्षीय पोखरेल ६ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । काठमाडौंमा जन्मेका दिवेशले कर्णाली, प्रलय बीजस्ता गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् […]
Posted on October 23, 2021 Author khabar silo
गितार बजाउँदै गीत गाउनु दिनेश ढकालको रुची हो । आफू कुनै दिन गायककै रुपमा चिनिनसक्छु भन्ने उनलाई कहिल्यै लागेको थिएन । तर गायकको रुपमा चिनिने रहर नभएको भने चाहिँ होइन । लकडाउनमा समय कटाउने मेलोको रुपमा आफूले लेखेको गीत ‘कालो केशमा रेलिमई, बाँधेको रिबन, युट्युव र टिकटकमा भाइरल भएपछि भने उनी दंगदास छन् । साथीभाइ […]